xaly iyo cershiida
July 29, 2019 12:30 pm in Maqaalo. by admin.
Hargeisa (MN) Xalay iyo Cershiida. Somaliland waxaa mara lakabka ‘stratasphere/lithosphere’ layidhaahdo ‘Nubian Sandstone’. Nubian sandstone waa lakabka laga helo dahabka wuxuuna samaysmay 3000 million sano kahor. Lakabkan jiyoolojintu waxay yidhaahdan inuu yahay curiye ‘primary source’ wuxuuna maraa wadamo badan oo ay kamid yihiin Sudan, Mali, Saudi Arabia, Yemen Somaliland iyo Ethiopia. Somaliland, nubian wuxuu kasoo bilaabma bariga Sanaag wuxuu ku dhamaada lawyacado. Dhulkan dahabka laga helay wuu guura oo dhulka/gobolada meelna debada ayuu usoobaxa e.g. gabiley & arabsiyo marna lakabkale ayuu hoos maraa oo lama arko. Qiyaas ahaan cershiida 8-20 ceel ayaa ku jira qiyaasta dahabka ku jira waxaa loomalaynaya inuu yahay 700 MT (6-9 Trillion dollar).
Dunidu waxay manafacsataa khayraadka dhulka ku jira oo horumarka maanta aynu joogno lagu gaadhay. tusaale, dhuxul dhagaxa waynu ka dheregsanahay horumarka lagugadhay 1800kii, shidaalka qeedhin ayaa isna hanaqaaday waxaa barbar socday ka faidaysiga macdanta qeedhin. Wadamada horumaray marka laga yimaado siyaasada qaawan intabadan waxaa barbar socda siyaasad qarsoon oo salka ku haysa khayraad. Tusaale, ruusku wuxuu siiriya ugu dagaalamaya laba arin; Svestapol & Gaasta dabiiciga ah (Qatar, Saudiga ) ee reer galbeedku doonayo inay kaga maarman gaasta ruushka (Gazprom) ka iibiyo Europta. Afganistan, waxaa la ogaaday madacnta qeedhin oo udhiganta 3 Trillion dollar inay ku jirto.
Dunidu waxay usoojesatay qaniyada Afrika siiba geeska afrika. Waxaa ladoonaya in la manaafacsado khayraadka/shidaalka ku jira 100 sano ee soosocda. Wakhti xadirkan xugta dahsoon waxay tilmaamay in shidaalki carabta uu gaabsi kujiro, waa in goobkale oo shidaal leh oo strategiga laga hawlgala. Wadamada khaliijku waa waa sheer oo saxarahii inay ku noqdaan donimayaan. Waxaana hogaaminya isla ii uun “Zion”. Stratejiyada Zionistku waxay tilmaamay hadii aanu cuniwayny waanu ciidayn. Guud ahaan wadankeena nimco ayaa fadhida, ayaan la dayacin.
Qoraaga abdiraxmaan siimoodi.